एनआरएनमा कसको पल्ला भारी ? Globe Nepal News Portal
एनआरएनमा कसको पल्ला भारी ?
Globe Nepal 2017-10-16
काठमाण्डौं, असोज ३०/विश्वभरि छरिएर रहेका करिव ७४ देशका नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय संघको आठो विश्व सम्मेलनले आज नयाँ नेतृत्व चुन्दै छ । कूल ३९ पदको लागि हुने निर्वाचनमा केही पदमा सर्वसम्मत भईसकेको छ ।तर मुख्य पदहरु अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महासचिव देखि सह कोषाध्यक्ष सम्म कसकसको उमेदवारी परेको भन्ने विवरण केही घण्टामा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्वाचन समिति रहेको छ । तर निर्वाचन समितिको मनोनयन अगावै सामाजिक सञ्जालवाट र विभिन्न सञ्चारमाध्यमवाट उमेदवारी घोषणा गरिसकेका दर्जन भन्दा वढी उमेदवार आफनो पक्षमा मतदान गर्न विभिन्न तरिकाले लागि परेका छन् । यो पटकको निर्वाचनमा कसको पल्ला भारी छ भनेर आँकलन गर्न त्यति सहज छैंन । कूल १४५६ मतदाता –पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार रहेको एनआरएनमा ४ सय सदस्य भएको यूरोप र २ सय सदस्य भएको अमेरिका क्षेत्रको मतले विशेष भूमिका खेल्ने संभावना रहेको छ । तर राजनीतिक र विभिन्न संस्थाहरुको व्लक मत आफूमा तान्न हरेक उमेदवार लागिपरेका छन् । यसैले अन्तिम सूची पछि कसले कत्तिको कसरत गरेर आफनो पक्षमा माहोल ल्याउँछन त्यसको आँकलन अहिले नै गर्नु हतारो हुनेछ ।
को को छन मैदानमा ?
एनआरएनको चौध वर्षको ईतिहासमा आफूलाई यसको नेतृत्वमा उपस्थित गराउन लागेका छन अध्यक्षका तीन दावेदार भवन भट्ट,जमुना गुरुङ्ग घले र टीवि कार्की । सन् २००३ मा एनआरएनको जन्म हुँदा यी तीन मध्ये भवनको मात्र नाम सुनिएको थियो । उनले एनआरएनलाई संस्थागत वनाउनका लागि आफनो तरिकाले निकै लागेका छन भने विगत लामो सयम देखि नेपालमा देखिने गरि अर्र्वेामा लगानी समेत गरेका छन् । जापानमा वस्दै आएका र जापानी नागरिक सँग समेत विवाह गरेका उनको सवल पक्ष भनेको निरन्तर संस्थामा लाग्नु नै हो ।
अर्को तर्फ एनआरएनको पहिलो महिला अध्यक्ष वन्न मैदानमा होमिएकी जमुनाको वारेमा उनको क्षमता र दक्षताको भन्दा पनि वढी चर्चा निवर्तमान हुनै लागेका अध्यक्ष शेष घलेको श्रीमतिको कारणले वढी आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको विषयमा घले संघ वनाउने देखि हिजो नै किन उठिनन भन्ने तर्कको दलिल पेश गरिएको छ ।
उता टिवी कार्की भने सधै एनआरएनको उमेदवार वन्ने पात्रको रुपमा उभिएका छन । उनले अघिल्लो पटक पनि अध्यक्षमा उमेदवारी दिएका थिए । यसरी हेर्दा एनआरएनको अध्यक्षमा भट्टको दह्रो आधारशिला देखिन्छ । तर निर्वाचनमा अनेकन फयाक्टरले काम गर्ने भएकाले नतिजा कसको पक्षमा जान्छ भनेर आँकलन गर्न निकै गाह्रो छ । भट्टलाई पूर्व अध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो देखि जीवा लामिछाने सम्मको समर्थन रहेको वताइएको छ ।
यसै वीच संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले एनआरएनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले भने हामीहरुको प्रयास सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने नै हुनेछ , यदि त्यसो हुन सकेन भने निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने छौं । उनले पराजित उमेदवारले निर्वाचन सकिए लगत्तै एनआरएनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उपाध्यक्षमा धेरै उमेदवार कम मतले जित्ने संभावना
एनआरएनको उपाध्यक्ष्यमा मैदानमा धेरै उमेदवार देखिएको छ । यस अगाडि अध्यक्षको लागि भनेर प्रचार गरेका कुमार पन्त पुन सोही पदमा उमेदवारी दिन तत्पर देखिएका छन् । उनलाई प्रतिस्पर्धा दिन अमेरिकाका कानून व्यवसायी खगेन्द्र जिसी मैदानमा देखिएका छन् । जिसी एनआरएन भित्र एक बौंद्धिक र शलिन व्यक्तित्वको रुपमा चिरपरिचित व्यक्तित्व छन् , एनआरएनका अमेरिका,वेलायत र अष्ट्रेलियाका लाई वढी चासो भएको विषय नागरिकताको निरन्तरताको विषयमा दख्खल राख्ने केही एनआरएन अभियन्ता मध्ये जिसी एक हुन् । यस अगाडि अमेरिकामा आफनो राम्रो छाडन सफल भईसकेका जिसीलाई एनआरएनका अभियन्ताहरुले पनि एक योग्य व्यक्तिको रुपमा लिएका छन् ।
यसैगरी उपाध्यक्षमा अमेरिकावाट सोनाम लामाले उमेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनी अहिले अमेरिकाज क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजकको रुपमा काम गर्दे आएको र घलेसँग निकट रहेर काम गरेकाले उनले आफूलाई सवल उमेदवारको रुपमा परिचय दिन चुक्ंदैंनन् ।
यसै गरी वेलायतमा वसोवास गर्दे आएका कूल आचार्य र यस अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रिय समन्वय समितिमा गत महिना मात्र हार व्यहोरीकी रविना थापाले पनि आफूलाई उपाध्यक्षको रुपमा उभ्याएका छन् । उता महासचिवमा हालका महासचिव डा.बद्री केसीले उमेदवारी दिने घोषणा गरेका छन भने कोषाध्यक्षमा नाईजेरियामा वस्दै आएका हिक्मत थापाले उमेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यो पनि पढनु होस
काेराेना फैलने डरले नेपाल उधाेग वाणिज्य महासंघकाे चुनाव स्थगीत
राष्ट्रवैंकले ल्यायाे माैद्रिक नीति,जनतालाइ राहत दिने यस्ता छन कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति पूर्णपाठ)
यस बर्ष भारतबाट मात्र ११ कराेडकाे कन्डम आयात, नेपालले भुटानबाट पनि कन्डम ल्यायाे
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा दक्ष जनशक्तिको खाचो
आन्तरिक उडानको भाडा वृद्धि
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघमा कर्माचार्य
प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्वाेधन गरेर भने-अफवाहकाे तुवाले फिजाउने काम भएकाे छ
पुर्वराजाले भने-भष्मासुर प्रवृत्ति वढयाे,जनताले मुक्ति खाेजिसके
देउवाले सरकारलाइ भने-अेालीले लाजमर्दाे र निन्दनीय काम गरे,काेराेना संक्रमितकाे निशुल्क उपचार गर
गाेदवरीले दियाे अेाली सरकारलाइ चुनाैती-हामी गर्छाैं निशुल्क काेराेना परिक्षण
नेपालमा काेराेना संक्रमण र मृत्यु हाल सम्मकै बढी उच्च,सरकारकाे सर्वत्र विराेध
कर्णाली प्रदेश विवाद वारे प्रचण्ड-अेाली सहमति,हटाइएका प्रमुख सचेतकलाइ पुन नियुक्ति गरिने